” လုပ်ရပေမယ့် မလုပ်သင့်ရင် လုပ်အုံးမှာလား “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” လုပ်ရပေမယ့် မလုပ်သင့်ရင် လုပ်အုံးမှာလား “
” လုပ်ရပေမယ့် မလုပ်သင့်ရင် လုပ်အုံးမှာလား “
Posted by ခင်ခ on Feb 2, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
ရန်ကုန်လေဆိပ် ပြည်ပထွက်ခွါ လေယာဉ်ခရီးစဉ်စောင့်ဆိုင်း ခရီးသည်နားနေရာတွင် နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲက သူတို့အချိုရည်သောက်ပြီး ဗူးခွံကိုပစ်ဖို့ ဟိုဟိုဒီဒီလှည့်လည်ကြည့်ပြီး အမှိုက်ပုံးဆီကို လျှောက်သွားပြီး ဗူးခွံကို ပစ်ထဲ့လိုက်တယ်။ အဲဒီနားနေခန်းမှာဘဲ ကျုပ်တို့လူမျိုးမြန်မာယောက်ျားလေးသုံးယောက်အဖွဲ့က သူတို့စား သောက် ပြီးတဲ့ အချိုရည်ဗူးနဲ့တစ်ရှုးစကို မိမိထိုင်နေတဲ့ဘေးခုံမှာတင်ထားပြီး လေယာဉ်ပေါ်တက်လို့ရသဖြင့် ခရီးသည် နားနေရာက ထလာတဲ့အခါ ခုနားအချိုရည်ဗူးခွံနဲ့တစ်ရှုးစတွေကို ခုံပေါ်မှာဒီလိုဘဲထားခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခု၏ ပြည်ပထွက်ခွါ လေယာဉ်ခရီးစဉ်စောင့်ဆိုင်း ခရီးသည်နားနေရာတွင် လေယာဉ်စောင့်ဆိုင်းရင်း မြန်မာလူတစ်စု လေယာဉ်စောင့်ဆိုင်းရင် မုန့်နဲ့အချိုရည်သောက်စားကြပြီးတဲ့အခါ အချိုရည်ဗူးခွံနဲ့စက္ကူအိတ်၊တစ်ရှုးစတို့ကို အမှိုက်ပုံထံသွားရောက်ပစ်တာတွေ့ရတယ်၊ အဲဒီအဖွဲ့နဲ့ ကျွန်တော် လေယာဉ်တစ်စီးထဲစီးပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်အရောက် ခရီးဆောင်အိတ်ရွေးတဲ့ဆီမှာ မိမိခရီးဆောင်အိတ် စောင့်နေကြတုန်း ခုနမြန်မာလူတစ်စုထဲကသူက လေယာဉ်စီးခွင့်လက်မှတ်ကို အင်္ကျီအိတ်ထဲကထုတ် ကပ်ထူလေးကိုခေါက်ပြီး ရပ်စောင့်နေတဲ့နေရအနီးနံရံနားမှာ အလွယ်တကူဘဲချလိုက်တယ်။
အဲဒီလိုမြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေအရ ကျွန်တော်ဘာတွေးမိလဲဆိုရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံကသူတွေ မသိတာလဲမဟုတ် သိသိကြီးနဲ့ လုပ်လို့ရတော့ လုပ်နေကြတာပါလား၊ လုပ်မရတဲ့ နေရာ၊ နိုင်ငံရောက်သွားရင် ဒီလူတွေဘဲ မလုပ်ဘဲနေပြီး စည်းကမ်း၊စနစ်ကို လိုက်နာကြတာဘဲ၊ အခြားနိုင်ငံကသူတွေ လုပ်လို့ရ ရ၊ မရ ရ ဖြစ်သင့်တဲ့ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်၊စနစ် ကို ဘယ်နေရာ ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် တသမတ်ထဲလိုက်နာကြတော့ သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေ အမြဲမြင့်သမို့ သူတို့တိုင်းပြည်လဲ အမြဲမြင်တဲ့ဆီကိုဘဲ ဦးတည်နေကြတာ မဆန်းဘူး ဆိုရမယ်လို့လေ။
မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲချင်ကြတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်သဏ္ဍန် ကိုယ့်အမူအကျင့်တွေကိုလဲ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးသားဖြစ်အောင် အရင်ဆုံး နေထိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြဖို့ အမှန်လုပ်ကိုလုပ်ကြရပေလိမ့်မယ်၊ အဲလို မဟုတ်ဘဲ လုပ်ချင်တဲ့သူကလုပ် မလုပ်ချင်တဲ့သူကမလုပ် ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး ရပါလိမ့်မယ် ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုးတက်သောပြည်နိုင်ငံကိုလို့ပြောရမယ့်ကိန်းပါဘဲ။
ကွမ်းတံထွေး မထွေးရ ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ ကွမ်းတံတွေး ခိုးထွေးထားကြတယ်၊
အမှိုက်မပုံရဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ လာပြီး အမှိုက်ပစ်၊ပုံကြတယ်၊
ကားမောင်းသွားရင် အလွယ်တကူစွန့်ပစ်တစ်ရှုး၊ပလပ်စတစ်အိတ်တို့ကို ဘေးမှန်ပေါက်ကနေ လွှင့်ချလိုက်တယ်၊
ဘစ်ကား သွားရမည့်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့ လမ်းဘေကာင်းကနေ ဘစ်ကားမောင်းနှင်တယ်၊
ဆိုင်ကယ်စီးလျှင် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်ပါဆိုပေမယ့် မဆောင်းကြဘူး၊ ယာဉ်ထိန်းဖမ်းတော့ အပြစ်ဆိုချင်တယ်။
အဲလို အဲလို တွေ အများများကြီးတွေ့နေ မြင်နေရလေလေ တိုးတက်ခေတ်မှီသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ ဝေးလေလေ လို့ဘဲ တွေးလေလေပါဘဲဗျာ။
တိုးတက်သောပြည်နိုင်ငံဖြစ်ချင်ကြရင် လုပ်လို့ရနေပေမယ့် မလုပ်သင့်ရင် မလုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ချင် ပါရဲ့။
” ဗွမ်း “
” ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် ဘာသံပါလိမ့် “
” ဘာသံမှမဟုတ်ဘူး အပေါ်ဆုံးထပ်က အမှိုက်ထုပ် နောက်ဖေးမြောင်းထဲ ပစ်ချလိုက်တာပါ ဖေကြီးရေ “
” ဟေ “
အရင်ဆုံးကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို Proactive ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ရှင်
တိုင်းပြည်အစိုးရကို ပြုပြင်ဖို့ပြောနေကြတယ် ဒါလဲ ခေတ်ပြောင်းစနစ်ဟောင်းပယ် တိုးတက်ချင်တဲ့ တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီဖြစ်ချင်ကြတာဆိုတော့ မမှားပါဘူး။
အဲလို အစိုးရကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တွန်းတိုက်နေကြတာနဲ့ တစ်ပြိုင်ထဲ မိမိပြုပြင်ရမယ့် စရိုက် အကျင့်တွေ ကိုလည်း ပြုပြင်ခ၀ါချပါမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာလေ အဲဒါ အဲဒါ ခင်သုတရေ။
တလောက.. နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီရဲ့..ဘော့စတွန်ကသူ့အိမ်ရှေ့.. ဆီးနှင်းခဲတွေမကျုံးလို့.. ရပ်ကွက်က..သူ့ကိုဒဏ်ငွေဒေါ်လာ၅၀တပ်တယ်..။ သူကပေးရတယ်..။
Rule of law သက်ရောက်မှုဟာ.. လူတန်းစားမရွေးဘူး..။
တလောက..ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ.. မယ်သီလရှင်တွေသီချင်းဆိုကြကကြ. ဖျော်ဖြေကြတာကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဗီဒီယိုတက်တယ်..။
တလောက.. ဒကာမတယောက်ကို.. ဘုန်းကြီးက.. မှောက်ခိုင်းပြီးလိင်ဆက်ဆံတဲ့.. ဗီဒီယိုတွေ့တယ်..။
ဥပဒေမှာ..လူတိုင်း(တိုင်း) လေးစားလက်ခံလိုက်နာမှု.. ရှိရတယ်..။
လူတန်းစားမခွဲခြားရဘူး..။ ရာထူးအဆင့်.. မခွဲရဘူး..။ ဘာသာရေးမလွှမ်းမိုးရဘူး…။
ဘုန်းကြီးထိ..မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့လူအုပ်က.. ဖိအားပေးကြပြီး.. ဘုန်းကြီးဥပဒေကျူးတာကို… ၀ိုင်းဝန်းဖာထေးပေးကြတာပဲ….။
နောက်ပိုင်းအရှိန်လွန်လာပြီး.. ဖာထေးပေးတာကနော.. ဥပဒေအရလုပ်မဲ့သူ..ဖွင့်ချမယ့်သူကိုပါ.. ရန်လုပ်လာတာပဲ…။
အနှစ်၁၀၀၀ ရင်းထားရိုက်သွင်းထားခံရတဲ့… ကျိန်စာ…။
လူတွေက. ဒီလိုဖြစ်တာတွေ…. ဒါတွေကြည့်ပြီး.. (မသိစိတ်ကနေ)လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြမယ်လို့.. မူလရည်ရွယ်ကြပြီးဖြစ်ကြောင်း…။
ပြောသာပြောတာ… ခုလိုရေးလို့.. ဘယ်သူတွေကသတ်ချင်နေမလည်း..မသိ..။
သဂျီး​ရေ ကျုပ်​တို့ မြန်​တျန့်​မှာဂ ဘာသာ​ရေးကိုလည်း စနစ်​တကျ ထိုး​ဖောက်​ဖျက်​ဆီးခံထားရသဗျ ။ အဲ့ ဒိကစ ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး ဘယ်​လိုပြင်​ပြင်​ ဒီလူ​တွေ အုပ်​ချုပ်​​နေသ၍​တော့ ​ကောင်းအံ့ မထင်​
မျစ်မမ စကားကိုးကားပြောရရင်.. စစ်စရိုက်..စစ်အုပ်ချုပ်ရေး.. အာဏာရှင်.. စသဖြင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံရေးခေးယေ့ာ.. ပဋိပက္ခ အားလုံးရဲ့ “လက်သည်”က… ဘာသာရေး…ဘာသာရေးဗျ..
ပထမမြန်မာနိုင်ငံထောင်ကတည်းက… အခုထိ… မှန်ကန်နေပါကြောင်း…သက်သေအကြိမ်ကြိမ်ပြခဲ့ပြီ…။
သမိုင်းသင်တာ.. မအ,အောင်…. တဲ့..။
ကွန်ဆာဗေးတစ်လွန်းနေတဲ့.. ထေရ၀ါဒဘာသာရေးထဲ.. သြဇာရှိသူဆရာတော်ကြီးများ ဦးဆောင်ပြီး..(နောက်မကျခင်) စလို့ပြင်သင့်..
အခု.. အသစ်တက်လာတဲ့.. ပုပ်ဖရင်န့်စစ် ရဟန်းမင်း လိုပေါ့…။
ရှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်း တော့ ပြသနာရှာပြန်ပြီ။ ကလေးများ ကို ရိုက်ဆုံးမ နိုင်သတဲ့။
ဟိုတစ်လောကလဲ သူ့ အမေ ကို စော်ကားရင် လက်သီး နဲ့ ထိုးမတဲ့။ lol:-)))
6 February 2015 Last updated at 11:54
Pope Francis has backed parents who smack their children, providing the child’s “dignity” is maintained.
အမှန်တော့ဗျာ.. နိုင်ငံခြားမှာ လူဒွေ စည်းကမ်းရှိတာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကောင်းလို့ပါ။ ဘွားဒေါ်ဂျီး အော်နေတဲ့ ရူးအော့လော ပါပဲ။ အဲဒီ လောဂျီးရူးနိုင်ဗို့ ငွေလိုသဗျ။ ဒါနဲ့ပဲ ဂျာအေးသူအမေရိုက် မုန့်လုံးစပ်ကူကပ်ရော။ နိုင်ငံခြားမှာ ကားမောင်းရင် လူတွေ သိပ်စည်းကမ်ရှိသဗျ။ ရှိဆို ကင်မရာ နေရာတိုင်းရှိ၊ မိအောင်လည်းဖမ်းတာကိုး။ မိတော့လည်း လက်သိပ်ထိုး ညှိမရ။ ညှိချင်ရင် ရုံးတော်တက် တရားဝင်ညှိ။ အမှိုက်လဲ ဒီလိုပဲ.. အမှိုက်ပုံး စုံစေ့အောင် ထားပေးရတယ်။ နယ်မြို့နဲ့ လူစုံတဲ့ နယူးယောက်လိုတောင် မတူ။ လူများတော့ ချီးများ၏။ လူကြောင့်မဟုတ် စနစ်ကြောင့် စနစ်ကြောင့်.. ဘာစနစ်လည်း မိရင် တကယ်တီးတဲ့ စနစ်…။ လူအားလုံးကတော့ အတူတူပဲ.. လစ်ရင်တီး ပေးရင်စားမည့်ကောင်ချည်းပဲ။ ပြည့်စုံအောင် ထားပေးတဲ့ စနစ်မှာ ကြီးပြင်းတဲ့ လူတွေက ဟုတ်သလိုပေါ့ဗျာ.. ဒါပေမဲ့ တလ ကိုးသီတင်း ပစ်ထားလိုက်ပါလား … အဲကြမှ လူဖြူ လူမဲ အသားအရောင် အယူဝါဒ မကွဲဆိုတာ လက်တွေ့သိလိပ်မဲ… လခွီး
ဦးကြောင်ကြီးပြောသလိုဆို ကျုပ်တို့နိုင်ငံက တလ ကိုးသီးတင်းမက ပစ်ထားခံရတာပေါ့နော်။
ပစ် ရက် ကြ ပါ ပေ့ အ စိုး ရ ရယ်။
ကျွန်မတော့ ဘာသာရေး ကြောင့် လုံးဝမထင်ပါ။ မိမိရဲ့ စိတ်နှလုံးသွင်းခံယူချက်ပါ။
လက်တွေ့ဘဝ ဆိုတာလည်း အကျိုးရှိလို့အကြောင်းဖြစ်တာပါ။ ဘာသာရေး
အတိုင်း လူတိုင်းလိုက်လုပ်နိုင်လျှင် စစ်ပွဲ,ရဲ,ထောင် တို့ရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လူတွေက ဘာသာရေးနဲ့ ခေတ်ကိုအမှီလိုက် နိုင်အောင် လုပ်နေရတယ်။
အဖျက်သမားတွေ က ဘာသာတိုင်းမှာတော့ရှိနေတာပါဘဲ။ လူတွေက ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ဘဲ
ကြည့်ကျတာပါ။အခုလို့တိုးတက်တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲ မှာ ရှိနေတဲ့ ရမက်တွေနဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်။
ကာမဂုံစိတ်တွေနောက်မှာပျော်မွေ့။ဒါနဲ့ လောဘ,ဒေါသ,မောဟတွေက အနောက်ကနေ ကပ်ပါလာတယ်။
(တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အာရုံကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် ကပ်ငြိခြင်းဖြစ်၏။
အသိဥာဏ်ထိန်းချုပ်ဖို့က မိမိသာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အကျင့်သီလမပျက်စီးအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဘဲထိန်းချုပ်ရတာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကဘဲ ခိုင်းတာပါ။
ဘာသာတစ်ခုကိုထဲထဲဝင်ဝင် အနှစ်သာရထိမသိဘဲ မိမိရဲ့အပေါ်ယံအမြင်ကိုယ်သိတာလေးနည်းနည်းနဲ့ မဝေဖန်သင့်ပါဘူး။
လူ့လောကကြီးက ရှုပ်ထွေးတဲ့ လောကကြီးပါ။ အရာရာကိုယ်ဖြစ်ချင်တိုင်း ကိုယ်ရနိုင်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှ မဟုတ်တာ။
လူမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ အကျင့်လို့ ဆိုရမှာပါဘဲ။
ကျနော်တို့ ဗမာတွေက… ဘာလို့များ…အမှိုက်ကို အမှိုက်ပုံးရောက်တဲ့အထိ… သယ်မသွားနိုင်ရတာလဲ…
ကွမ်းယာထည့်တဲ့ အိတ်သေးသေးလေးက အစ…
လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားပြီး အမှိုက်ပုံးဆီရောက်မှ ပစ်ဖို့… ဘာလို့ ခက်ခဲ ဝန်လေးနေကြသလဲ…
ပြီးစလွယ်…ငါ့လက်က လွတ် ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့….ပေါ့ပျက်ပျက် အမှိုက်ပစ်ချသူတွေ …ရန်ကုန်မှာ တပုံကြီးပဲဗျာ..
.စည်းကမ်းရှိဘို့ရာ သွန်သင်ဆုံးမမှု ၊ မွေးရာဗီဇ အသိစိတ်သာမက
.ပတ်ဝန်းကျင် အခြေနေလည်း ထည့်တွက်ရတော့မယ် ကိုခရေ…
.ကားမှတ်တိုင်နားမှာ အမှိုက်ကန်ကြီးလာထားတယ်၊ ပြည့်လျှံနံစော်နေပါရော
.မနက်ရုံးသွားချိန် နံစော်နေတဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးဘေးမှာ ဘယ်သူရပ်နေချင်ပါ့မလဲ
.ဒီတော့ လမ်းထိပ်က တားစီးကြတယ်၊ ကားကလည်း တက်မယ့်လူဆို ရပ်ပေးတယ်။
တစ်ခါတလေ ပြီးပြီရော လုပ်တာတွေနဲ့ လက်စမသတ်တာတွေကလဲ တကယ်ဆိုးပါတယ်ဗျာ။
တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာလဲ ကားမှတ်တိုင်နား အမှိုက်ပုံးထားတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်းအချိန်မှန် အမှိုက်သိမ်းစနစ်ကောင်းတော့ ဒီလိုပြသနာမဖြစ်ဘူး ဒီမှာကတော့ ထားသာထားတယ် ပိုက်ဆံမရ အလကား ပြန်လှည့်သိမ်းဖို့ဆို သိပ်မလုပ်ချင်ကြဘူးလေ။
စိတ်ဓာတ်အခံတွေက မကောင်းအောင် စနစ်ကဘဲ ဖျက်ခဲ့တာလား လူကဘဲပျက်ခဲ့တာလား ဘာပြောရမှန်း မသိဘူး မအိရေ။
လှိုင်သာယာဘက်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက ဘေးဘီကြည့်လိုက်ရင်…ကွမ်းယာအိတ်တွေချည်း…။ အဲ့ဒါ လမ်းတလျှောက်လုံးပဲ…။ ပလပ်စတစ်အိတ်တွေလေ…။
ပြီးရင် ရေမြောင်းတွေပိတ်ပြီး ရေလျှံပါရော…
လူတွေက အမှိုက်ကို လမ်းဘေးပစ်တာဟာ အပြစ်မရှိဘူးလို့..တွေးနေကြသလိုပဲ…။ တခါလဲ ကားနောက်ခန်းကနေ အအေးဘူးခွံလွှင့်ပစ်တာ နောက်ကပါလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကံကောင်းပေလို့ပေါ့…။
ဦးကျော်သူတို့ အမှိုက်ကောက်နေတာ ကြားပါတယ်….။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဖွဲ့ သူရို့ဆီလာလေ့လာတော့ အိတ်လေးတစ်အိတ်ကို ဘယ်သွားသွား သယ်သွားသတဲ့…။ အစက သူတို့က တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းပါမယ်မှတ်တာ…။ နောက်ဘယ်ဟုတ်မလဲ..၊ အမှိုက်ထည့်ဖို့ သယ်တာ ဖြစ်နေတယ်..။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အမှိုက်လမ်းဘေးပစ်တာ အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို ခံစားမိလေတော့…ဘယ်လုပ်မလဲနော်…။
မွသဲ ကားပေါ်မှာ အမှိုက်ပုံးထားတယ်လို့ ပြောဖူးလို့…သဘောကျထှာ…
အဖေ့ကိုရော ဖယ်ရီပေါ်မှာပါ ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်သေးတယ်…။
လေးခပြောတဲ့ နိုင်ငံတွေက တစ်မြို့လုံး CCTV တပ်ပြီး တံတွေးထွေးတာကအစ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ကြေးကောက်တယ်လေ…။ ဒီတော့ ပေးနိုင်သမျှ လုပ်ပေါ့..၊ ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်မှာလဲ…။
နောက်ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမလုပ်အောင် စိတ်ဓာတ်တွေ ပြုပြင်ထားတာကိုး…။
ဒါဏ်ပေးတယ် ဆိုတာ က လူ တွေ ကို အကြောက်တရား နဲ့ ထိန်းတာ။
ကိုယ့်အသိ နဲ့ ကိုယ် ထိန်းနိုင်ဖို့ မှာ အရှက်တရား က လဲ အရေးကြီး တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကိုခ ရေ။